Cali Dheere oo ka Hadlay Weerarkii Al Shabaab ay ka Gaysteen Magaalada Gaalkacyo - Hablaha Media Network
Cali Dheere oo ka Hadlay Weerarkii Al Shabaab ay ka Gaysteen Magaalada Gaalkacyo
HMN:- Afhayeenka guud ee Ururka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo la hadlay Warbaahinta ku hadasha afka-Shabaabka ayaa faah-faahin wuxuu ka bixiyay sababtii ka dambeysay in qaraxyo Ismiidaamin ah ay ka fuliyaan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland.
Qaraxyada Ismiidaaminta ah ee Gaalkacyo ka dhacay ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 25 ruux oo u badnaa dad shacab ah, kadib markii mid ka mid ah qaraxyada lagu beegsaday Suuqa Xero Dayax oo dad badani xilligaasi ay ka dukaameysanayeen.
Afhayeenka ururka xagjiriinta ee Al Shabaab ayaa wuxuu sheegay in Qaraxyada ay ku dileen ku dhawaad 30 xubnood oo isugu jira Askar iyo Masuuliyiin Maamulka Puntland ka tirsan.
Sababta ka dambeysa in Qaraxyada ay ka geystaan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ayaa wuxuu ku sheegay inay tahay in Puntland ay xiriir dhaw la leedahay Itoobiya ayna qaataan amarada ka soo baxa Dowladda Itoobiya.
Cali dheere ayaa ku hanjabay hadii Maamulka Puntland uu joojin waayo xiriirka tooska ah ee ay la leeyihiin Dowladda Itoobiya inay la kulmi doonaan qaraxyo hor leh oo Shabaabka ka fulindoonaan Magaalada Gaalkacyo.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland mudane, Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar (Camey) oo shalay ka hadlayay Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay Qaraxyada Shabaabka ay fuliyeen in lagu doonaayay in lagu laayo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Puntland oo goobta ku sugnaa, laakiin ilaaahay ma qadarin.